Muuse Biixi:“ Socdaalkayaga Sool Waa Nabad iyo Midnimo” (dhegayso) – Radio Daljir
Noofember 24, 2018 3:25 g 0
Muuse Biixi Madaxweyanaha maamulka somaliland ayaa maanta gaaray jiida horre ee tukara oo ay ku suganyihiin Ciidamadda somaliland ee dagaalka kula jira kuwa Puntland.
Bixi ayaa inta uusan tagin Tukaraq waxaa lagu qabtay magaaladda Laascanood banaanbax looga soo horjeedo socdaalka uu ku marayo qaybo kamid ah gobalka sool.
wuxuu khudbad u jeediyeey ciidamadda jiida tukaraq isagoo ka hadlay arrimo baddan oo ay kamidyihiin xaaladda gobalka sool,dagaalka ay kula jiraan Ciidamadda Puntland.
isago hadlayeey ayuu yiri ” Socdaalkayaga maanta wuxuu yahay Nabad iyo midnimo ,waxaynu maanta u bahaanahay nabad,haduu aynu hareereheena iyo dalaalka jaarka ah waxaa kadhacaya waxaan rabnaa in nabad lagu wadda nolaado” ayuu yiri isaggo la hadlayeey shacabka laascanood.
dhinaca kale wuxuu ka hadlay dagaalka ay kula jiraan Puntland isago tilmaamay in aysan donayn dagaal balse loo bahanyahay wax walba in nabad lagu dhameeyo.
Socdaalka Biixi ee gobalka sool ayaa kusoo beegmaya xili maanta Madaxweyne Gaas uu dib ugu soo laabtay Garoowe isago kaga qayb galay Garacad Furitaanka dhismaha dekadda Garacad.
Madaxweyne Gaas kama uusan hadlin safarka Madaxweynaha Somaliland ee ku marayo degaano ay sheegato Puntland oo gobalka sool ka tirsan.
Tukaraq waxaa isku horfadhiya Ciidamadda Maamuladda Puntland iyo Somaliland,waxaana laga cabsi qabaa socdaalka Biixi inuu sababo dagaal dhexmara Ciidamadda is horfadhiya ee labadda dhinac.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 437 Wararka 15497
on Wasaaradda Waxbarashada DFS oo Ardeyda Puntland u Diiday Shahaadoonyinkii ay ku aadi lahaayeen Jaamacadaha (dhegayso )MAAMULGOBOLEEDADA INDHO ADKAANTOODAAN LA YAABAA INRTAY AWOODII WAZARADDA WAXBARASHADA EE DFS GARAB MAREEN BAY HADANA...
on Shacabka jubbaland oo jahwareersan iyo Madaxweyne sadexaad oo lagu dhawaaqayADEER J/LAND HALMADAXWEYNE BAY DOORATAY OO AH AXMED MIDEEYE...KUWA KALANA IYAGAA IS DOORTEY,ADIGAAGA WARIYAHA AHBA...
on Caawa & Daljir iyo Axmed Shiikh Maxamed (Tallman), Daljir Boosaaso (dhegayso)HAA WAA SAX SSC WAA LA HAYSTAA,OK,MAR AWOOD BAA LAGUGU JABIYAA,MARNA TALO XUMO BAA LAGUGU...
on Siyaasi Dr Cabdi daahir Yey oo ka hadlay Dulaanka Somaliland& Gumaadka Shacabka Laascaanood (Daawo)ADEER INUU KA HADLAABA QALADA... QAWDA MAQASHII WAXNA HAW QABAN LOOMA BAAHNA. SSC QARAN JABAY...
on Guddoomiyihii Hore gobalka Sool oo ka hadlay Mudaharaadkii Lascaanood (Daawo)ADEER GEELAA LOOGU HEESAA: WALEE TOOYOOY TASHAN WEYDAYE WAA LAGUU TALIN. DHINACA KALE SNM HALOO...